HTC One Max ~ The ICT.com.mm Blog
KMDမှ ပေးပို့လာသော သတင်းကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်ရဲ့ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး Smartphone hTC One ရဲ့ အစ်ကိုကြီးဖြစ်တဲ့ hTC One Max နဲ့အတူ သင့်ရဲ့ဘဝကို ပုံဖော်ကြည့်ကြပါစို့။ ၅.၉ လက်မရှိတဲ့ Super LCD3 Screenနဲ့အတူ Resolution: 1080 x 1920, hTC Boom Sound System တွေကြောင့် Video ကြည့်ကြည့်၊ Game ဆော့ဆော့ စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
1.7 GHz Quad-Core CPU, Adreno 320 GPU,2GB RAM စတာတွေကို အသုံးပြုထားတာဆိုတော့ အင်တာနက်သုံးရင် လိုင်းဆွဲကောင်းတယ်၊Applicationတွေသုံးရင် လျင်မြန်သွက်လက်မှုရှိတယ်၊ MultiTask run ဦးမှာလား အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ Internal Memoryက 16GB/32GB နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပြီး microSD Cardကို 64GBအထိ တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။ Cameraကတော့ ဘယ် Smartphoneမှာမှ အသုံးပြုထားခြင်းမရှိသေးတဲ့ Ultra Pixel နည်းပညာနဲ့ သင့်ဘဝရဲ့ အမှတ်တရတွေအားလုံးကို အမိအရ ဖမ်းယူပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ hTCရဲ့ Unique Features တွေဖြစ်တဲ့ BoomSound၊ BlinkFeed၊ Zoe Cameraအပြင် Finger Print Systemလဲ ပါဝင်ပါသေးတယ်။ Android Version 4.3 ( Jelly Bean ) Operating System ဖြစ်ပြီး hTC Sense 5.5 ကို ထည့်သွင်းထားပေးပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက် hTC One M8 မှာပါဝင်တဲ့ hTC Sense6ကိုလဲ Upgrade လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း: 663,000 kyats။
hTC One Max Smartphone အသုံးပြုများအတွက် အထူးသင့်တော်မယ့် Accessory များ-
Size : 118.7 x 39.8 x 7.15mm
Display : 1.5” white color4gray OLED, 128X128 resolution
Connectivity : Bluetooth® 2.1 + EDR NFC pairing
Battery : Embedded battery, 320 mAh
ဖုန်းပြောရင်းနဲ့ အင်တာနက်သုံးမယ်၊ Video ကြည့်မယ်၊ Game ကစားမယ်၊ ဖုန်းပြောနေတုန်း Message လက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Mail ရောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Chat နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် Multi task လုပ်နိုင်ခွင့်ပေးမယ့် hTC Mini+ ပါ။ Multitask အပြင် hTC Smartphoneကိုလဲ အဝေးကနေ Control လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ hTC Media Link HDနဲ့ တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ TV Remote အနေနဲ့ပါ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း။ ဈေးနှုန်း : 78,000 kyats။
Size : 84.0 x 52.0 x 12.2 mm
Multimedia : Video: AVI, MP4, MOV, 3GP, MKV, H.264 BP/MP/HP
Connectivity: micro-USB port for powerHDMI port
Applications: DLNA enabled apps (eg. Gallery and Music) and screen mirroring.
Special Features : DLNA, Mirroring, 3-finger swipe
ချိတ်ဆက်ရမြန်ဆန်ခြင်း၊ အပြုသုံးပြုရတာအဆင်ပြေမှုရှိခြင်း ၊ Wireless စနစ်အသုံးပြုထားခြင်း နှင့်အတူသင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ TV Channel စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် hTCဖုန်းမှတဆင့် High Definition TV ကိုထိန်းချုပ် နိုင်စွမ်းပေးနိုင်မယ့် hTC Media Link HD ။ ဈေးနှုန်း :72,000 kyats
Size : 29.35 x 29.35 x 9.3mm
Special Features: Secure your phone and belongings, Last seen tracking, Remote camera shutter, Easy to set up. Easier to use.
Connectivity : Bluetooth® 4.0/BLE
Working Range : Up to 15 meter (Depends on working environment)
Battery :6month battery lifetime (CR2032 replaceable battery)
Compatibility : HTC One mini, HTC Butterfly s, HTC One max
အပြင်သွားပါတော့မယ်ဆိုမှ ဖုန်းဘယ်နားထားမိမှန်းမသိဘဲ ရှာရတာတော့ လူတိုင်းကြုံဖူးမှာပါ။ ဒီလိုဖုန်းပျောက်လို့ ရှာရတဲ့ ပြဿနာကို အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာကတော့ ချောမွတ်၊ သိပ်သည်းတဲ့ Designနဲ့ Key Chain ပစ္စည်းလေးဖြစ်တဲ့ hTC Fetch ပါပဲ ။ Fetch ရဲ့ မျက်နှာပြင်လေးကို နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ Pair လုပ်ထားတဲ့ ဖုန်း(ပေ ၅၀ အတွင်း)က Ring လာပါလိမ့်မယ်။ ဈေးနှုန်း :26,000 kyats
Connectivity: Micro USB charging port
Hardware: Power / pairing buttonStatus LED indication
BatteryCapacity: 1200 mAhEmbedded rechargeable Li-polymer battery
hTCBoomBassကတော့ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားရလွယ်ကူတဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ သိပ်သည်းမှုရှိတဲ့ လေးထောင့် Speaker ဖြစ်ပါတယ်။ Smartphone Stand အနေနဲ့လဲ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကက်ဆက်လိုမျိုး၊ ကော်ဖီစားပွဲတင် TV အသေးစားလိုမျိုးသုံးရင် အထူးသင့်တော်တာပေါ့။ Phoneနဲ့ Speakerကို wireless စနစ်ဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့နေရာ သယ်သွားလို့ရတဲ့ အရွယ်အစားနဲ့၊ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေတဲ့ အသံထွက်နဲ့ hTCBoomBass။
ဈေးနှုန်း :78,000 kyats။
hTC Stylusကတော့ Smartphone အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ပိုမိုတိကျ သေချာစေမည့် လုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါတယ်။ Design သေသပ်လှပမှုရှိပြီး အသုံးပြုရ အဆင်ပြေတဲ့ Stylus Pen ပါ။
ဈေးနှုန်း :11,000 kyats။
အထက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအားလုံးကို hTC Concept Store (ပန်းဆိုးတန်း KMD) အမှတ် ၁၇၄-၁၈၂ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း (အလယ်ဘလောက်) ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ (ဖုန်း 01-318035 , 01-381129 | Extension 127 ) ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Newer Googleက ဘရာဇီး ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးကွင်းများကို Google Street Viewမှ ကြည့်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေး
Older Acer Aspire E1- 470 (i3)